Kala fogaashaha Swedishka iyo soo galootiga oo la filayo in uu siyaado | Somaliska
Kala fogaashaha Swedishka iyo soo galootiga oo la filayo in uu siyaado
Baaritaan uu sameeyay wargeyska Dagens Nyheter (DN) ayaa lagu soo bandhigay in kala fogaashaha dadka Swedishka ah iyo soo galootiga uu aad u siyaadayo. Wargeyska oo baaritaan ku sameeyay deegaanada ay deganyihiin Swedishka iyo soo galootiga ayaa soo bandhigay in ilaa sanadkii 1991 ilaa hada ay aad u siyaaday kala fogaashaha shacabka, iyadoo soo galootigu ay u badanyihiin guryaha dabaqyada ah, halka Swedishkuna ay degaan vilooyinka yaryar.
Degmooyinka Botkyrka, Södertälje iyo Kristianstad ayaa ah goobaha ay dadku aad u kala soocan yihiin, iyadoo magaalooyinka Stockholm, Göteborg iyo Malmö ay sidoo kale siyaaday kala sooca dadka. Arintaan ayaa waxaa marqaati ka ah xaafadaha Stockholm ee Rinkeby, Tensta iyo Husby oo ay aad ugu badanyihiin soo galootiga. Waxaa la mid ah Rosengård oo ah xaafada soo galootiga ee Malmö. Magaalada Södertälje ayaa iyadu noqotay goob ay qabsadeen Syriyanka, iyadoo xitaa ay isaga guureen soo galootiga kale sida Soomaalida.
John Östh oo ah qabiir ku taqaqusay cilmiga bulshada oo wax ka dhiga jaamacada Uppsala ayaa wargeyska u sheegay in soo galootigu ay u wanaagsanyihiin Sweden balse arinta ku saabsan kala sooca dadka aysan wanaagsanayn oo dhibaato ay keeni karto mustaqbalka. Kala fogaashaha bulshada ayaa waxay keentay in goobaha ay soo galootigu ku bataan ay isaga guuraan Swedishka, taasoo keenta in ay sidoo kale hoos u dhacdo tayada nolosha ee xaafadahaas maadaama ay sidoo kale isaga guuraan shirkadaha iyo xafiisyada dowlada. Xaafadaha qaarkood ayaa xitaa noqday goobo ay ka cabsadaan dabdamiska, ambalaaska iyo booliska.
Swedishka oo ka barakacay xaafadaha soo galootiga
Maxaa kala qabsaday Soomaalida iyo erayga “kintir”
Siyaasi ku sheeg aflagaadeeyey somaalida Iswiidhan kuna sheegay “buradda kansarka”